Isu-gudubka Heerka Ku-meel-gaarka ah ee Larende Neighborhood | RayHaber | raillynews
HomeGUUDHeerka Ku-meelgaarka ah ee u gudubta Larende Deriska
19 / 08 / 2013 GUUD, HAY'ADAHA, Headline, TURKEY, TCDD
U gudubka Heer ku meelgaarka ah ee Degmadda Larende: Degmada Karaman iyo TCDD 6. Agaasime Goboleedka Larende Market Wheat Inringection ee ku-meelgaarka heerka ku-meelgaarka ayaa la qorsheeyay in lagu sameeyo isgoyska waxaa lagu saxiixay xaflad.
Duqa degmada Kamil Uğurlu, TCDD kuxigeenka agaasimaha gobolka Oğuz Saygılı, kuxigeenka Ertuğrul Çalışkan, maareeyaha wadooyinka Halil Dönmez iyo maareeyaha xarumaha Murat Göl ayaa kaqaybgalay kulanka lagu qabtay xarunta maamulka degmada. Shirka ka dib, degmada Karaman iyo TCDD 6. Borotokool ayaa la saxeexay inta u dhexeysa Agaasinka Gobolka. Borotokoolka, waxaa la go’aamiyay in la dhiso hal isugeyn heer tareenka ah si loo bixiyo lugeeyayaasha iyo taraafikada taraafikada. Maamulada Degmooyinka, Larende Neighborhood, oo ahmiyad weyn leh isla markaana meesha ka saaraysa dhibaato gaadiid oo waaweyn maalmaha soo socda ee shaqadan ayaa bilaaban doona waxaana la furi doonaa bisha Diseembar ee sanadkan.
Wadada gawaarida ee isgoysarka ka sokow, isgoyska dadka lugeynaya ayaa la sameyn doonaa. Isgoyska heerka ayaa si ku meel gaadh ah u adeegi doona. Dawlada hoose ee Karaman ayaa markaa samayn doonta marin marin halkii ay ka gudbi lahayd heerkan. Waxaa la ii sheegay in shaqadan qorsheysan ay noloshu siinayso Larende Neighborhood.
Xaafadda Agaasimka Xaafada Aydın
Lacagta Tareenka ee Waddada Xaafadda
Karamanda Larende Underpass ayaa socota
Larende wuxuu ku shaqeeyaa xawaaraha Full
Shaqada ayaa si deg deg ah uga socota Larende hoosteeda Karaman
Ka shaqee dhinaca Larende hoosteeda Karaman
Larende Underpass wuxuu ku jiraa adeegga gaaban
Goobta Selimiye xaafada asphalt
Wakiilka Qaxootiga ee Magan-galyo doonka ah (Video)